Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Adnan Januzaj Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye kasị mara aha; "Adnando". Anyị Adnan Januzaj Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mbido ya na ọkwa football. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Adnan Januzaj's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Eche Ezinụlọ
Malite na, Januzaj sitere na ezinụlọ Kosovar-Albanian. Nna ya sitere na agbụrụ Albanian mgbe nne ya Ganimete Sadikaj si Kosovo. Nke a site na itinye aka pụtara na Januzaj nwere mgbọrọgwụ Turkish na Serbian. N'ịbanye n'ime ezinụlọ ya, nna nna ya bụ Turkish mgbe nne nne ya bụ Serbian.
Nabata Nna ya: Nna Januzaj, onye isi ndị agha na 1992 gbapụrụ na nsogbu Balkan iji gbanahụ ịda ogbenye na mkpagbu nke ndị ọzọ so n'ezinụlọ ya tara.
N'ịbụ onye dara ogbenye, nna Adnan Januzaj bụ Abedin, gbagara Belgium ka ọ zere ịbụ ndị ndị agha Yugoslav debara aha ya maka agha na Bosnia. Mgbe Abedin gbara ọsọ na Kosovo, ndị ọzọ so n'ezinụlọ ya dị nso dị ka e sere n'okpuru ebe a buuru agha na mba nke nnwere onwe megide ndị Serbia.
Na-aga n'ihu n'etiti afọ 1990, Adnan Januzaj mụrụ nne na nna ya zutere ma daa ịhụnanya na Belgium.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Ndụ mbido
A mụrụ Adnan Januzaj na 5th nke February 1995, nye nne ya, Ganimete Sadikaj (otu nwanyị na-azụ ahịa otu nde mmadụ) na nna, Abedin Januzaj (onye bụbu onye isi ndị agha) na Brussels, Belgium.
A sịrị na nna Januzaj bụ Abedin, bụ nnukwu mmetụta ya na nchọta na mmepe nke talent nwa ya nwoke nke mechara bulie meteoric.
Ọchịchọ Adnan Januzaj nwere maka ịgba bọọlụ hụrụ ya ka ọ debanye aha ya n'akwụkwọ nke otu ndị ntorobịa nọ na ya nyere ya ohere iji gosipụta amamihe ya. Ọ dịghị oge tupu Januzaj (nke dị n'okpuru ebe a) na-aga n'ihu na Anderlecht agụmakwụkwọ mgbe ọ dị afọ 10.
N'oge ahụ, ọ bụrụ Adnan na-egwuri egwu, nna ya ga-eme ka ọ mara banyere ya. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike isi ike ma mgbe ụfọdụ Adnan ga-akwa ákwá n'ihu ya. Ma o nwere echiche na papa ya maara ihe ọ na-eme. Ọ kụziiri nwa ya ka ọ kụọ aka na nke ahụ dị mma maka mmepe ya.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Na-eto Eto
Mgbe Adnan na-egwuri egwu na agụmakwụkwọ ahụ, ọ gara ụlọ akwụkwọ na arụ ọrụ bọọlụ abụọ na ndị ọkachamara dị ka nhọrọ ndị nne na nna ya mere. Otú ọ dị, n'ụbọchị ahụ mechara bịa, otu ụbọchị mgbe ndị na-egwu egwu si Manchester United gara Belgium na-achọ ndị na-agba ọsọ maka ụmụaka. Ha niile na-elezi anya na nwa ọ bụla na-egwuri egwu.
Ndị a scouts hụrụ talent Januzaj mgbe ọ ghọgburu aghụghọ n'ụlọ akwụkwọ nka. Ihe ndị nwere mmasị ndị a nwere mmasị bụ ụzọ Januzaj si dị njikere na ịdị njikere dribble ndị enyi ya dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe okike kachasị n'ụwa. Enweelarị ama na ọ sitere na agụmakwụkwọ Anderlecht.
Manchester United scouts gara n'ihu nyochaa ọganihu ya ruo mgbe ọ dị afọ 16. Mgbe ọ dị afọ iri na isii, Anderlecht agụmakwụkwọ chọrọ itinye ya n'okpuru nkwekọrịta iji gbochie ụlọ ọrụ Bekee ịpị kpakpando ha mana amachibidoro omume ahụ maka onye ọkpụkpọ 16 afọ. O di nwute, ulo akwukwo a furu ya na Manchester United onye zutara Januzaj maka € 16.
N'oge ahụ, e nwere akụkọ ndị kọrọ akụkọ na United na-akwụkwa ụgwọ ọzọ NYNUMX na ezinụlọ Januzaj ma nye ha ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na otu n'ime akụkụ kachasị mma nke Manchester ebe Adnan bi na nne ya na papa ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Ndụ mmekọrịta
N'ịbụ onye mara mma ma na-eguzo na elu 6 ụkwụ 1, Adnan Januzaj bụ, na-enweghị mgbagha, ọmarịcha nwanyị na ndepụta ọ bụla nwanyị chọrọ. N'ikwu okwu banyere ndụ onwe ya, Januzaj maara na ya na Tulisa Contostavlos nọ na 2013.
Tulisa bu onye egwu na onye ukwe ma puta dika onye ikpe na X Factor. Ọ bụ afọ 6 toro na Januzaj ma dee na mbụ Danny Simpson onye na-agbachitere Queens Park Rangers. Foto dị n'okpuru bụ Tulisa na ịhụnanya mbụ ya (Simpson).
Ụbọchị kpuru ìsì: Januzaj nwere ụbọchị kpuru ìsì na Melissa McKenzie na 2014. Ọ kpọọrọ ya maka ụbọchị mbụ na Adnando ma jiri £ 18 rie nri ọkụkọ na-ekpo ọkụ. Melissa hapụrụ ya mgbe emechara mgbasa ozi nke akwụkwọ nri 18 ya dị egwu malitere ịrịa.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Ihe Ntugha
Onye na-agba ọsọ football, James Collins jụrụ mgbe ọ bụla ọ ga-eyi uwe ọhụrụ Manchester United mgbe onye ọkpụkpọ kachasị amasị ya bụ Januzaj gbanwere nọmba ndị agha ya.
James bụ onye dị afọ asatọ n'oge ahụ na-atụ egwu na a ga-ama ya njakịrị Adnan Januzaj gbanwere nọmba ya site na 44 ka 11.
E nweghị ụzọ ọ ga - esi zụta ihe ọhụrụ ahụ mgbe e kpughere ya na ọ ga - apụ apụ otu ọnwa. N'ikpeazụ, ọ na-eche ma chebe ụbọchị ọmụmụ ya maka ya.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Ihe Ezinụlọ
Nna: Nna Adnan Januzaj bụ ọkpara nke ụmụ isii amụrụ nye ezinụlọ Januzaj.
A na-atụ anya na Abedin ga-elekọta ezinụlọ ya mgbe nna ya Idriz (nna nna Adnan Januzaj), onye na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ textile, dara ọrịa kansa. N'ihi ihe isi ike na ọchịchọ ịlanarị, Abedin hapụrụ enweghị nhọrọ ọ bụla ọzọ karịa ịbanye na ndị agha Yugoslav nke Serb na-alụ ọgụ na Bosnia.
Abedin gbahapụrụ wee gbaga Belgium na 1992 ebe o mechara zute nwunye ya (nne Adnan Januzaj) bụ onye a hụrụ akụkọ ya n'okpuru.
Banyere Mmekọahụ Ya (The Uncles Obi): N'oge agha ahụ, ndị nna nna Januzaj, Januz na Shemsedin na nwanne mama Lavi bụ ndị otu bonafide nke Kosovo Liberation Army bụ ndị chụrụ ndụ ha ọgụ site na ịlụ ọgụ maka nnwere onwe n'oge Kosovo War. Otu ihe pụtara ìhè n'etiti ezinụlọ Januzaj. Dị ka nwoke nwere obi ike, ha nwekwara ụmụ nwanyị nwere obi ike. N'okpuru bụ foto nke Shemsedin Januzaj na nwunye ya Lavi (n'aka ekpe) n'oge ha na KLA na-alụ ọgụ.
N'aka nke ọzọ, Uncle Januz ka a tụrụ nga afọ 15 maka isonye na ngagharị iwe na-achọ ikike ndị Albania n'akụkụ Yugoslavia nke bụ Kosovo ugbu a.
“Abụ m onye ọgụ na KLA na nwunye m. Anyị lụrụ ọgụ n'otu otu ndị agha. E gburu otu n'ime ezigbo ndị enyi m - ọ zọnyere ụkwụ na ogbunigwe. ”
Nne: Nwunye Abedin na nne Adnan, Ganimete Sadikaj, bụkwa onye a na-agbata mkpọrọgwụ. A mụrụ ya na otu n'ime ezinụlọ ndị kasị baa ọgaranya na Istog, obodo na obodo dị na Eastern Kosovo. Ezinụlọ ya; ndị Sadikajs dị ka ọchịchị egwu nke ọchịchị Yugoslav nọ na-eyi egwu mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị. A manyere ha ịhapụ Kosovo nke mere ka ha kwaga Turkey.
Onye bụbu agbata obi, Arif Haskaj, kwuru otu oge banyere ezinụlọ nne Adnan. N'okwu ya;
'Ezinụlọ Sadikaj nwere ọtụtụ ala na ugbo. Ha so n'ime ndị kasị baa ọgaranya n'obodo. Ma, ha ga-agbapụ na Turkey n'ihi na ndị ọchịchị Serbia wepụrụ ala ha na ihe onwunwe ha n'oge ndị Kọmunist, mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị. '
Na Brussels, ezinụlọ nne Adnan mechara kwaga Belgium ebe nna nna ya, Alija, nwere azụmaahịa ma na-agba ọsọ na mba ahụ. Ọ bụ na Belgium na Destiny mere ya zute Abedin di ya.
Adnan Januzaj nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma nke ọma -Eziokwu nke Onye
J na aha ya "Januzaj" bụ ịgbachi nkịtị. Otú ọ dị, a na-ekwu na aha ya nwere ọdịiche dịgasị iche iche n'ikwu okwu ya. Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-akpọ ya dị ka ndị a; Janussaj, Janussigh, Yanoossajh na Yan-You-Sigh. Ikpeazụ bụ site na Sky Sports 'nke ukwuu Geoff Shreeves.
Ezinụlọ Januzaj dị ezigbo mkpa na Kosovo na e nwere nnukwu ụlọ dị na mpụga obodo Istog akpọ “Ogbe nke Januzaj"
Ezinụlọ Adnan Januzaj sitere na Kosovo. Mana Kosovo amaghi FIFA. Site na ihe nketa, ndị nne na nna Adnan Januzaj bụ ndị Albanian.
Abdel Jaichi, onye nkuzi nkuzi ụlọ akwụkwọ ochie nke Januzaj kọwara ya 'ihere' na 'achọghị ọdịmma onwe onye nanị'. Adbel dị n'okpuru ebe a kụziiri Januzaj site na 12 ruo mgbe ọ kwagara Manchester na 16. Ọ maara ya dị ka nwatakịrị ihere nke setịpụrụ ihe atụ maka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na ndị ọrụ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Adnan Januzaj Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Ifiedbọchị agbanwee: November 1, 2020